Taskade: Mpitantana asa tena misy amin'ny horonan-tsary sy fanitsiana fiaraha-miasa | Martech Zone
Taskade: Mpitantana asa tena misy miaraka amin'ny fanovana horonantsary sy fiaraha-miasa
Alakamisy, Jona 28, 2018 Alakamisy, Aprily 1, 2021 Douglas Karr
Tamin'ity volana lasa ity, nangatahan'ny orinasa roa samy hafa aho hampiasa rafitra fitantanana sasany amin'ireo tetikasanay. Samy mahatsiravina izy roa. Apetraho amin-kitsimpo; ny fitantanana ny tetikasa no mamono ny famokarako. Ny rafi-pitantanana tetikasa dia tokony ho mora ampiasaina raha tianao ho mahomby ny ekipanao. Ankafiziko ireo sehatra fitantanana asa tsotra, ary izany no fomba Taskade dia noforonina.
Inona ny atao hoe Taskade?
Taskade dia fampiharana fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy ho an'ny hevitrao, ny tanjonao ary ny asanao isan'andro. Arindrao ny eritreritrao, ataovy izay hahavitana zavatra, haingana sy mahira-tsaina kokoa. Lisitry ny fanamarihana, naoty, ny drafitra, nofaritanay ianao.
Taskade dia manao dokambarotra ho toy ny malefaka, tsara tarehy ary mahafinaritra… miaraka amin'ny endri-piaraha-miasa tena izy:
Chat - mifanakalo hevitra, miara-miasa ary manitsy ny lisitry ny lahasa amin'ny fotoana tena izy.
Workflow - alamino sy ampanjifainao ny lisitry ny lahasao mba hifanaraka amin'ny fomba fiasanao.
sehatr'asa -Ny sehatr'asa dia fanangonana lisitra na naoty azonao iantsoana ny hafa hanatevin-daharana.
Teams - manome andraikitra, mizara naoty ary manara-maso ny fandrosoan'ny ekipa.
Templates - Nahazo ny fizotran'ny asa azo averina? Ampidiro ny iray amin'ireo maodelin'ny Taskade hanombohana ny tetikasanao.
Ny tsara indrindra dia i Taskade fampiharana ho an'ny iOS sy Android findainao, na ny birao Mac na Windows anao. Izy ireo koa dia nanangana fanitarana tsara ho an'ny Chrome sy Firefox. Taskade dia amin'izao fotoana izao maimaim-poana - miaraka amin'ny kinova Pro ho avy tsy ho ela.
Midira ho an'ny Taskade
Tags: fampiharana fampiharanabrowser extensionfitaovana asa maimaim-poanaMobile Appsfamokaranalisitry ny lahasafitantanana asataskadeWorkflowsehatr'asa
Ny antony 5 lehibe indrindra dia mitaky tolona hanamafisana ny ROI ara-tsosialy